Okufanele ube nakho kwabesilisa abanezinwele ezinhle | Amadoda aSitayela
Abesilisa abanezinwele ezinhle abasekho bodwa. Banamathuluzi amaningi nangaphezulu ezandleni zabo ukufeza izitayela zezinwele ezinhle, njengoba kunjalo ngomlingisi uTheo James.
Imikhiqizo evusa izinwele ikhule ngokuhlukahluka, inombolo futhi, ngaphezu kwakho konke, ikhwalithi. Lapha sikukhombisa okuhle kakhulu ongakufaka kunqubo yakho.
Ukuqinisa izinwele ezinhle kufanele kuqale ngokuwasha. I-Aveda Invati Exfoliating Shampoo ngeke ikubuyisele ezinsukwini lapho wawunenqwaba yezinwele khona. Noma kunjalo, kuzokusiza ukuthi ukusebenzise ngokugcwele lokhu onakho.
Lo mkhiqizo okhilimu futhi olula ukhipha isikhumba ekhanda futhi uqinisa izinwele ezinhle. Imfihlo ilele ku-densiplex, inhlanganisela yezitshalo (kufaka phakathi i-turmeric ne-ginseng) esebenza ukwenza izinwele zakho zibukeke zijiyile.
Ngaphambi kokuthayipha izinwele zakho, sebenzisa i-Label.Men hair tonic. Ngeke kube isenzo ize, njengoba kwenzeka ngemikhiqizo eminingi yalolu hlobo. Futhi yilokho iyakwazi ukwandisa ivolumu yezinwele zakho ngamaphesenti ayishumi.
Imivimbo embalwa yalo mkhiqizo ene-panthenol ezinweleni zakho nayo izosiza ukuwungenisa futhi uvikeleke. Lezi yizici ezingeke zanganakwa, ngoba ukwenza kanjalo kuzosiza ekwenzeni ukubukeka kwazo kube yize kakhudlwana futhi kungaphili.
Abesilisa abanezinwele ezinhle kufanele bathathe izinyathelo zokuphepha uma kuziwa ekumakeni isitayela sabo nge-hairspray, i-gel yezinwele ne-wax. Lungisa, lungisa, kepha iningi ligcina lisisinda.
Uma udinga ukulungiswa, qiniseka ukuthi luhlobo lokuqina, njengaleli elivela endlini yaseKérastase. Ngaphezu kokuqina kwezinwele, azishiyi okusalayo futhi zinikeza umphumela ohlala isikhathi eside.
Omunye umkhiqizo ongeke ulahleke ku-arsenal yakho yi-shampoo eyomile. I-Aussie Miracle Dry Shampoo Aussome Volume ikuvumela ukuthi ugeze izinwele zakho ngaphandle kwamanzi.
Yisebenzise phakathi kokuwasha ukugcina umzimba nevolumu yezinwele zakho. Ezinye izinzuzo zefomula yayo, equkethe ukukhishwa kwembewu yejojoba yase-Australia, ukuthi inuka kamnandi futhi iyaqabula kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Imikhiqizo emine ebalulekile yamadoda anezinwele ezinhle
Amawashi ayishumi ahamba phambili angaphansi kwama-euro angama-60
UDavid Beckham, owesilisa oMnyama embukisweni kaLouis Vuitton